Indian Cinema Archives - MoviesFan
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝိညာဉ်ဟာသကား နှစ်ခြိုက်သူများအတွက် Stree
Stree ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဟာ အိန္ဒိယရိုးရာကျေးလက်တစ္ဆေပုံပြင်တစ်ခုကိုအခြေခံကာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Bhopal နဲ့ Mumbai ဒေသတွေမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ကာ ၂၀၁၈ မေလမှာအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Stree ကို ၂၀၁၈ သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့မှာရုံတင်ခဲ့ပြီး ဝေဖန်သူများဆီက ချီးကြူးသံတွေရခဲ့တဲ့ Comedy Horror ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် Read More
Comedy, Horror, Indian Cinema
အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားကောင်းနှစ်သက်သူများအတွက် Vishwaroopam 2
RAW (Research & Analysis Wing) လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Wisam နဲ့ သူ့အဖွဲ့ဟာ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အိုမာ ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို တားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ အိုမာဟာ New York ကကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြီးရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ သောင်းကြမ်းသူတစ်ဦးပါ။ ဒီလိုတားဆီးခဲ့တာကြောင့် အိုမာတို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းက Wisam နဲ့ သူ့အဖွဲ့သားတွေကို ကလဲ့စားချေဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ Read More
action, Crime, Indian Cinema
မိုဟီနီဆိုတာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ဘုရားမတစ်ပါးရဲ့ နာမတော် ။ ဒီ နတ်ဘုရားမက ကလဲ့စားခြေဖို့အတွက် အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ထဲဝင်ပူးခဲ့လေသလား? ဒါမှမဟုတ် ကလဲ့စားခြေလိုစိတ်ပြင်းပြလွန်းတဲ့ Vaishnavi ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဝေဒနာပုံရိပ်သက်သက်ပဲလား? ဒါကိုတော့ တမီးလ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ ချောက်ချားဖွယ်နဲ့ ကလဲ့စားတို့ကိုရောယှက်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကား “Mohini” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာကြည့်ရှူအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။ တမီးလ်စကားပြော အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တဲ့ Mohini ရုပ်ရှင်ကို တမီးလ်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Read More